Case Study – धर्मको नाममा पाप | Madhesi - United We Stand
Case Study – धर्मको नाममा पाप
November 5, 2006 at 9:30 am 1 comment
Case Study : Child Marriage in Madhesh
धर्मको नाममा पाप
घनश्याम कुर्मीको घर सिंगारियो । मान्छेहरूको चहलपहल बढ्यो । झ्याइ-झ्याई बाजा बज्न थाले । जन्ती भेला भए । चिटिक्क पारेर सिंगारिएको घर अगाडिको मण्डपमा १५/१६ वर्षका दुलाहा राखियो । भित्रबाट गहना र कपडाले सजिएकी दुलही निकालियो । र, मधेसी परम्पराअनुसार विवाह सुरु गरियो । भर्खरै जंुगाका रेखी बसेका दुलाहाको छेउमा कपडा संहाल्न नसक्ने दुलही । झट्ट देख्दा कुनै चलचित्रको अभिनय जस्तो लाग्थ्यो । वास्तविक ठानिँदैनथ्यो । गत वैशाखमा रुपन्देहीको लुम्बिनी आदर्शमा देखिएको यो वास्तविक थियो जहाँ घनश्याम ७ वर्षे छोरीको बिहे गराउँदै थिए । नाकको सिंगान राम्ररी पुछ्न नसक्ने छोरीलाई पराईलाई सुम्पँदै थिए । तर उनलाई गुनासो थिएन । न त विस्मात नै । बरु गौरव महसुस पो गरेका थिए ।
‘माइतैमा छुई -रजस्वला) होला कि भन्ने डर कत्रो । डरैडरले १० वर्षभित्र त बिहे गराउनै पथ्र्यो । ठीक्कै भयो । केटी माग्न उनीहरू घरमै आए । बिहे भयो । केटा खोज्दै हिंड्नु परेन,’ उनले खुसी पोखे ।
कुर्मीले यसअघि ४ बहिनी छोरीको विवाह गराइसकेका छन् । छिमेकीका अनुसार तिनीहरूको उमेर पनि ७/८ वर्ष माथि थिएन । किन त ? घनश्याम भन्छन्- ‘बाजेबराजुका पालादेखिको चलन हो । लात मार्न सकिएन । कन्या हुँदै छोरीको बिहे गरिदिनु, ठूलो पुण्य कमाइन्छ भन्थे । पुण्य कमाउन मन लाग्ािहाल्यो । मैले पनि
त्यसै गरेँ ।’
रुपन्देही मर्चवार क्षेत्रमा मधेसी समुदायका अधिकांश परिवारले आफ्ना छोरी १० वर्ष नपुग्दै विवाह गराउँछन् । मर्चवारका मानव अधिकार कार्यकर्ता तथा शिक्षक प्रभुनारायण यादवका अनुसार मधेसी समुदायका यादव, गुप्ता, ठहरे, कुर्मी, लोध, हरिजन, बाजिया, कलवार, पासी, पासवान, मौर्य र थारू जातिमा बालविवाहको चलन अझै छ । शिक्षित र सम्पन्न परिवारमा पनि यो चलन उस्तै छ । यादव भन्छन्- ‘यहाँका अधिकांश मधेसी धर्ममा बढी कट्टर छन् । रजस्वला नहुँदै छोरीको बिहे गराए ७८ सय गाई दान गरेसरह धर्म हुन्छ रे ।
मर्चवारका ११/१२ वर्षका बालिका सिउँदोमा सिन्दुर, घाँटीमा मोटो पोते र हातभरि रातै चुरा लगाएका भेटिन्छन् । तर ती बालिकालाई विवाह कोसित भएको हो थाहा हुँदैन । न थाहा हुन्छ, विवाह कहाँ भएको हो ?
‘कुन्नि कोसित बिहे भयो ? मलाई के थाहा ? ऊ आमाबासित सोध्नुस् न । उहाँहरूलाई सबै थाहा छ,’ उमाले भनिन् । टाउकोभरि सिन्दुर लत्पताएकी लबनीकी ९ वर्षे उमालाई विवाहबारे केही थाहा छैन । जो दुलाहा बनेर आए पनि पत्याउँछिन् ।
आमाबाका अनुसार उमाको बिहे गत माघमा कपिलवस्तुको भैंसीकुण्ड गाविसमा भएको हो । उता केटा सानो यतातिर केटी झन् सानी । दुवैतिरका आमाबाको मिलोमतोमा विवाह गराएका थिए । उमाका बा रामहरक चौधरी भन्छन्- ‘परम्पराअनुसार ८ वर्षमा बिहे गराइयो । अहिले त देखे पनि दुलाहालाई चिन्दिन । पछि ठूली हुँदै जाली, बिहेबारे पनि बुझ्दै जाली ।’ दस वर्ष नपुग्दै विवाह भए पनि उनीहरू माइतमै बस्छन् । दुलाहा दुलहीको भेटघाट हुँदैन । १३/१४ वर्षमा गौना गरेपछि मात्र उनीहरू केटाको घर जान्छन् ।
हुन पनि वैदिक धर्मग्रन्थ, धर्मसिन्धु र मनुस्मृतिमा सात वर्षभन्दा मुनिका छोरी बिहे गरी पठाएमा ७८ सय गाई दान गरेसरह फल मिल्छ भनी लेखिएको छ । यसअनुसार सनातनदेखि नै बालविवाह हुने गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । तर बेलाबेलामा नियम परिवर्तन भएका भेटिन्छन् । उतिबेलै स्वयं मनुले आफ्नी छोरी देवभूतिलाई सात वर्षमा करदम ऋषिसँग विवाह गराएका थिए । विवाहपछि गृहआश्रम र देवभूति पतिव्रता भए । यसैले सात वर्षमा गरिएको उक्त विवाह उत्तम ठाने । र, सात वर्षमा विवाह गर्ने चलन चलाए ।
समय बित्दै जाँदा क्रमशः विदुषीहरूले धर्मशास्त्रलाई जितेर आफूखुसी उमेरमा बिहे गर्ने चलन पनि चलाएका थिए । तर भारतमा मुस्लिम राजाहरूले राज्य गर्न थालेपछि औरंग्ाजेवको पालामा यो प्रथा अन्त्य भयो । मुस्लिम राजाहरूले राम्रा-राम्रा केटीहरूसँग जबर्जस्ती विवाह गर्न थाले । त्यसपछि ब्राह्मणहरूले छोरीहरूको सानैमा बिहे गरिदिने चलन बसाए । बच्ची आठ वर्षकी भए गौरी, नौ वर्षकी भए रोहिणी र दस वर्षकी भए कन्या मानेर विवाह गरिदिने चलन बसाले । केहीगरी दस वर्षभित्रमा विवाह भएन भने पनि रजस्वला हुनुअगाडि छोरीको विवाह नगरे ७८ सय गाई मारेसरह महापाप लाग्छ भन्ने उक्ति चल्ााए ।
जमाना बदलियो । नियम कानुन पनि फेरिए तर धर्मको नाममा चलेको कुसंस्कार उस्तै छ । धार्मिक शास्त्रहरू र मनुस्मृतिले समेत नारीलाई उपभोग्य वस्तु र साधनका रूपमा चित्रण गरेका छन् । बालविवाह यसैको उदाहरण हो । समय बित्दै जाँदा अरु समुदायमा यो प्रथा कम भए पनि मधेसी समुदायमा अझै व्यापक रूपमा रहेको छ ।
बालविवाह नहट्नुमा सामाजिक मान्यता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । मर्चवार क्षेत्र महिला सशक्तीकरणकी सामाजिक कार्यकर्ता पम्फादेवी खनाल भन्छिन्- छोरी ठूली भएपछि बिग्रन्छन्, परिवारको इज्जत घट्छ, समाजले हेंला गर्छ र ठूली भएपछि बिहे गर्न पनि अप्ठेरो पर्छ भन्ने मान्यताले पनि मधेसी समुदायले छेारीको बिहे सानैमा गरिदिएका हुन् ।
बालविवाह हटाउन मर्चवार क्षेत्रमा थुप्रै कार्यक्रम चलाइएका छन् । सफलता भने हात परेको छैन । प्रायः अश्ािक्षित मधेसीहरूले भोजपुरी र अवधीभन्दा अरू भाषा जान्दैनन् तर कार्यक्रम चलाउनेहरू चाहिँ नेपाली बोल्छन् । खनालका अनुसार यही भाषिक समस्याले पनि यस्ता कार्यक्रम सफल भएका छ्रैनन् ।
उसो त, कानुनले समेत बालविवाहलाई गैरकानुनी घोषित गरेको छ तर आजसम्म बालविवाहविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत परेका छैनन् । नेपाल बार एसोसिएसन बुटवल शाखा सदस्य मीना पन्त भन्छिन्-र् मर्चवारका मधेसीहरूमा बालविवाह मानव अधिकार विरोधी काम हो भन्ने चेतना छैन । त्यसैले मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भइरहँदा पनि कसैले विरोध गरेका छैनन् । मीनाको सुझाव छ, ‘नियम कानुनमात्र बनेर हुँदैन, व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ । शिक्षा र चेतना नफैलिएसम्म बालविवाहजस्तो कुप्रथा मौलाइरहन्छ ।’ विश्व हिन्दु महासंघ रुपन्देहीका गणेशमान सैंजू पनि समाजमा नराम्रो असर पार्ने संस्कारहरू धर्मका नाममा बचाउन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्- ‘धर्मकै नाममा मधेसी समुदायमा बालविवाह भएका हुन् भने त्यो धर्मका नाममा कलंक र पाप हुनेछ । समयअनुसार पुरातन धार्मिक संस्कारहरू पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ ।’
Nepal becoming country of marginal farmers	लोकतन्त्रमा मधेश
1. Dirgha Raj Prasai - Nepal | April 15, 2009 at 2:03 am
Dear sister Anamol !
I extend thanks that you have published this fine and analitical real article. But, I request you, plese, write Tarain people but not madhesi people. If you will start to write Tarain people there will be no confusion. In Tarai there are meny rtibes- Tharu, Rajbanshi, Dhimal, Madhsis etc.
I always read your article in another newspapers.